Kutheni le nto iSantya sePhepha siBalulekile? Uvavanya njani kwaye uphucule eyakho | Martech Zone
Kutheni le nto iSantya sePhepha siBalulekile? Uvavanya njani kwaye uphucule eyakho
NgoLwesithathu, Meyi 15, 2019 NgoLwesithathu, Meyi 15, 2019 UTyson ngokukhawuleza
Uninzi lweendawo zilahlekelwa sisiqingatha seendwendwe zazo ngenxa yesantya sephepha. Ngapha koko, iphepha eliphakathi lewebhu yedesktop Ireyithi yokubuyisa i-42%, Umndilili wephepha lewebhu elihamba bounce lireyithi ngama-58%, kwaye umndilili wokucofa emva kokucofa iphepha lokuhlawula iphepha ukusuka kuma-60 ukuya kuma-90%. Ayisiyonyani amanani nangayiphi na indlela, ngakumbi xa ujonga ukusetyenziswa kwefowuni kuyaqhubeka nokukhula kwaye kuya kusiba nzima ngemini ukutsala nokugcina ingqalelo yabathengi.
NgokukaGoogle, ixesha eliphakathi lokulayisha iphepha le- amaphepha okufika aphezuluisengu odangeleyo 12.8 imizuzwana. Oku kubandakanya indawo apho ukufikelela kwi-intanethi okuxhaphakileyo kuxhaphakileyo kwaye isantya se-4G zezona ziphakamileyo kwihlabathi liphela.
Isantya sephepha eliphakathi lide kakhulu, kuthathelwa ingqalelo i-53% yabasebenzisi bayeke amaphepha emva kwemizuzwana emi-3-kwaye iba mbi ukusuka apho:
Sisiphi isantya sokulayisha iphepha elilungileyo, emva koko? Phantse kwangoko.
Ngethamsanqa, kukho isisombululo. Ngaphambi kokuba sifike kuloo nto, makhe sityhile ngakumbi ngokubaluleka kwesantya sephepha.
Kutheni Imicimbi yeSantya sePhepha
EMarketer ibonisa ukuba kwi2019 Inkcitho kwintengiso yedijithali iya kudlula i-316 yeedola zigidi kwaye kujongeka kuphela kukonyuka kwikamva elibonakalayo:
Ngokucacileyo, iimveliso zisebenzisa imali eninzi kwiintengiso kwaye zilindele ukufumana okona kuhlahlo-lwabiwo mali. Kodwa, xa abantu becofa intengiso- kunye cofa iphepha lokufika emva isilele ukulayisha kwangoko-banokucofa umva emva kwemizuzwana embalwa, kwaye ngenxa yoko, uhlahlo-lwabiwo mali lomthengisi luyachithwa.
Iindleko ezichaphazela isantya sephepha zinkulu kakhulu kwaye kuya kufuneka wenze isantya sephepha njengeyona nto iphambili yokuqhubela phambili. Nazi iimitha ezimbalwa kunye namanqaku onokuthi uwaqwalasele njengoko uvavanya owakho umkhankaso wentengiso yedijithali:
Ayisiyiyo kuphela imithwalo yamaphepha acothayo aphazamisayo abasebenzisi, kodwa ikwabangela ukuba amaXabiso oMgangatho asokole Kuba iNqaku loMgangatho linxulumene ngqo nelakho isikhundla sentengiso, kwaye ekugqibeleni into onokuyihlawula ngokucofa nganye, iphepha elicothayo elinciphisa ngokwendalo linciphisa amanqaku.
Ukuba bambalwa abantu abancamathele belinde iphepha lakho ukuba lilayishwe, bambalwa abantu abafumana ithuba lokuguqula. Bayalishiya iphepha lakho ngaphambi kokuba babone unikezo lwakho, izibonelelo, ukubizela inyathelo, njl.
Ukuthengisa, umzekelo, nkqu ukulibaziseka komzuzwana omnye kumaxesha omthwalo oshukumayo anokuchaphazela amaqondo okuguqula ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-20.
Phakathi ku-2016, usetyenziso lwewebhu olusebenzayo kudluliswe i-desktop traffic ngokwevolumu:
Ngokuchitha kwabathengi ixesha elininzi kwiselfowuni, Abathengisi kunye nabathengisi (kwaye nangoku) banyanzelwa ukuba baziqhelanise. Enye indlela yokuhambisa Imikhankaso elungiselelwe mobile kukwenza amaphepha okulayisha ngokukhawuleza.
Oku kusizisa kwisisombululo se- # 1 esikhawulezayo sokujongana nemicimbi nganye kwezi.
Ukufika kwamaphepha e-AMP kunyusa isantya sephepha
I-AMP, ifayile ye- isakhelo somthombo ovulekileyo ukwaziswa ngo-2016, kubonelela ngendlela yokuba abathengisi benze umbane ngokukhawuleza, ukulayishwa okuthe tyaba kwamaphepha ewebhu abeka phambili amava omsebenzisi ngaphezulu kwayo yonke enye into.
Njengomkhokeli ekusebenzeni emva kokucofa emva kokucofa, i-Instapage ibonelela ngesakhono sokwenza iphepha lokucofa emva kokucofa usebenzisa isikhokelo se-AMP:
Ne Umakhi we-AMPAbathengisi kunye nabathengisi banako:
Yenza i-AMP emva kokucofa amaphepha okufika ngokuthe ngqo kwiqonga le-Instapage, ngaphandle konjiniyela
Qinisekisa, uvavanyo lwe-A / B, kwaye upapashe amaphepha e-AMP kwi-WordPress okanye idomeyini yesiko
Hambisa amava angcono eselfowuni, wandise amanqaku oMgangatho, kwaye uqhube uguquko oluninzi
Inkampani eguqukayo yokuncedisa ukuva i-Eargo ibone iziphumo ezintle ukusukela oko yaphumeza i-AMP kumava ayo okucofa emva kokucofa:
Ukufika kwamaphepha e-AMP nge-Instapage
Ukongeza ekwakheni amaphepha e-AMP nge-Instapage, zininzi ezinye iindlela onokuthi uphucule isantya sephepha. Nazi ezintathu zazo ukuze uqalise.
Ezinye iindlela ezi-3 zokuphucula ukukhawuleza kwephepha
1. Izixhobo zokukhawulezisa iphepha
Ikhasi eliPhezulu Uvavanyo olukhawulezayo lukaGoogle olufumana amanqaku kwiphepha lakho ukusuka kumanqaku ayi-0 ukuya kwali-100:
Ukufumana amanqaku kusekwe kwiiparamitha ezimbini:
Ixesha elingasentla lomthwalo (ixesha elipheleleyo lephepha ukubonisa umxholo ngaphezulu kwesibaya emva kokuba umsebenzisi ecele iphepha elitsha)
Ixesha lokulayisha iphepha elipheleleyo (ixesha elithathayo isikhangeli ukuze libonelele ngokupheleleyo emva kokuba umsebenzisi elicelile)
Ukunyuka kwamanqaku akho, kokukhona iphepha lakho liya kulungiswa. Njengomgaqo wesithupha, nantoni na engaphezulu kwe-85 ibonisa ukuba iphepha lakho liqhuba kakuhle. Ngaphantsi kwe-85 kwaye kuya kufuneka ujonge iingcebiso ezinikezwe nguGoogle ukuphakamisa amanqaku akho.
I-PageSpeed ​​Insights ibonelela ngeengxelo kuzo zombini iinguqulelo zedesktop kunye neselfowuni kwiphepha lakho, kwaye ikwabonelela ngezindululo zokuphucula.
Cinga ngoGoogle: Vavanya indawo yam, Iphehlelelwe liqela lePageSpeed ​​Insights, kuvavanyo kuphela lwesantya sephepha, ngokuchasene neselfowuni kunye nedesktop. Esinye isibonisi sokukhawuleza (okanye ukucothisa) umthwalo wamaphepha akho:
Esi sixhobo sibonisa ixesha lakho lokulayisha, sinika iingcebiso zesiko ukukhawulezisa iphepha ngalinye kwindawo yakho, kwaye emva koko linike ukhetho lokuvelisa ingxelo epheleleyo.
Imifanekiso eLungiselelwe ngokupheleleyo (Ukucinezela)
Ukulungiselela imifanekiso ngokucinezela, ukuphinda wenze ubungakanani kwakhona, ukuguqula kwakhona, njl njl kunokunceda ukugcina ii-byte, ukukhawulezisa ixesha lokulayisha iphepha, kunye nokuphucula ukusebenza kwesiza esiphathwayo. Phakathi ezinye iingcebiso eziphezulu, UGoogle uthi ukususa imifanekiso engafunekiyo ephezulu kunye nee-GIF kunye nokutshintsha imifanekiso ngombhalo okanye i-CSS xa kunokwenzeka.
Ngapha koko, ngoku kulula kunakuqala ukuba unikezele ngemifanekiso ecinezelweyo kunye neesayizi kuba ezi seto zinokuzenzekelayo. Umzekelo, unokuba nemifanekiso engamakhulu kwaye icinezelwe ngokuzenzekelayo ngeskripthi, ukunciphisa umsebenzi wesandla (xa usakha amaphepha e-AMP, iithegi zemifanekiso yesiko zenza uninzi lolungelelwaniso olufanayo ngokuzenzekelayo).
Ukukhetha ifomathi efanelekileyo yomfanekiso kunokuba nzima ngeendlela ezininzi ezikhoyo. Konke kuxhomekeke kwimeko yokusetyenziswa, kodwa Nazi ezinye zezona ziqhelekileyo:
IWebhu: Imifanekiso kunye nemifanekiso eguqukayo
I-JPEG: Iifoto ezingenalubala
PNG: Imvelaphi ebonakalayo
I-SVG: Iimpawu ezinokutsalwa kunye neemilo
UGoogle ucebisa ukuba uqale ngeWebP kuba ivumela i-30% yoxinzelelo ngakumbi kune-JPEG, ngaphandle kokulahleka komgangatho womfanekiso.
3. Beka kuqala umxholo ongentla
Ukuphucula ukuqonda komsebenzisi ngesantya sendawo kubaluleke kakhulu njengokuphucula isantya sendawo ngokwayo. Yiyo loo nto yakuba imifanekiso yakho yenziwe nkulu, kuya kufuneka uqiniseke ukuba ihanjiswa ngexesha elifanelekileyo.
Cinga ngoku: Kwiselfowuni, icandelo elibonakalayo lesiza lilinganiselwe kwindawo encinci, ngentla kwesibaya. Ngenxa yoko, unethuba lokulayisha ngokukhawuleza umxholo kuloo ndawo, ngelixa ezinye izinto ezingaphantsi kokukhuphela okungasemva ngasemva.
Qaphela: Yintoni enceda ukwenza i-AMP yahluke kukuba ikwakhelwe ukulayishwa kwezinto eziphambili, kuqinisekisa ukuba kuphela ezona zixhobo zibalulekileyo ezikhutshelwayo kuqala.
Kungangumceli mngeni ukunciphisa inani lemifanekiso kwindawo-ngakumbi iimveliso zentengiso, umzekelo, kunye neemveliso ezininzi- kodwa kusabalulekile ekunciphiseni iimpembelelo zemifanekiso ngexesha lokulayisha ngezi ndlela zintathu.
Yandisa isantya sephepha lakho nge-AMP
Ukuba amaphepha akho eselfowuni anengxaki yokufumana amaxabiso aphezulu kunye neenguqu eziphantsi ngenxa yesantya sokulayisha esikhawulezileyo, amaphepha e-AMP anokuba sisisa sakho sokugcina.
Qalisa ukudala amaphepha e-AMP emva kokucofa ngokukhawuleza, ukulungiselela, kunye namava afanelekileyo okukhangela iifowuni kubakhenkethi bakho, kwaye uphucule amanqaku akho oMgangatho kunye nokuguqulwa kwinkqubo.
tags: ampiphepha lokufikainqanaba lotshintshoizinga lokuguqulwauxinzelelo lomfanekisoiintlobo zemifanekisoUkukhwelajpgmaphephaamava eselfowuniIsantya sephepha leselfowuniisantya sokuhambamobile webIsicazululi sephephaisantya sephephaIsicazululi sephepha lesantyapngizixhobo zesantya sendawosvgcinga noGooglewebp
UTyson Ngokukhawuleza nguMsunguli kunye ne-CEO ye-Instapage, inkokeli ekusebenzeni emva kokucofa. Waseka i-Instapage kwi-2012 emva kokubona indlela abathengisi bokusebenza kunye nokukhula abalahlekelwa ngayo yimali kwimikhankaso yentengiso. Ukusukela ngoko umbono wakhe ibikukudala isuti yeemveliso ezenziwa emva kokucofa ucofa imbuyekezo ephezulu ngokwenza intengiso ibe yeyakho.
Kutheni iCRM yasimahla yeHubSpot iyiSkyrocketing
Yintoni iSicwangciso seNtengiso?